Taliyihii Ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir oo saakay Shaaciyay in uu is casilay – STAR FM SOMALIA
Taliyihii Ciidanka Booliiska Gobolka Banaadir oo saakay Shaaciyay in uu is casilay
Taliyaha qeybta guud ee Booliska Gobolka Banaadir,Jen. Cali Xirsi Barre (Cali Gaab) , ayaa saakay shaaca ka qaaday in uu iscasilay kana tagay Shaqadii uu ka hayay Taliska Booliiska Gobolka Banaadir.
Cali Gaab oo saakay la hadlay warbaahinda magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in si iskiis ah uu u go’aansaday in uu shaqada uga tago, waxa uuna meesha ka saaray in cadaadis dhanka shaqada ah uu la kulmay.
”Waxaan rabaa in aan idin sheego in aan iska casilay shaqadii Taliyaha Qeybta Guud ee Booliska Gobolka Banaadir, aniga ayaa go’aansaday in aan si iskey ah isku casilo, ma jirto cid igu qasabay iyo qof aan dacwo ka ahay” Ayuu yiri Cali Gaab.
Gen. Cali Gaab ayaa ahaa sargaal si weyn looga yaqaanay Gobolka Banaadir ,waxa uuna horey usoo noqday Taliyihii Ciidanka Nabad Galyada Wadooyinka Taraafiko, walina si dhab ah looma oga sababta Cali Gaab ku kaliftay in uu iska casilo xilkii uu hayay.
Waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlaayey amaanka muqdisho
Wabiga shabeele ayaa wali fatahaad ka wada magaalada baledwene ee gobalaka hiiraan(Daawo Sawirada)